Live Stream Of Nadal Vs Djokovic: How to Watch The Roland Garros Ndị Ikpeazụ Maka Free Site n'ebe ọ bụla - 【The Comparison】
Ukwuu na-agbanwe SKF eluigwe na ala bellows kit.
Nadal vs Djokovic live stream: otu esi lelee ụmụ nwoke Roland Garros nke na - akwụghị ụgwọ n’ebe ọ bụla
Nke a bụ egwuregwu ọtụtụ n'ime anyị na-eche. Mkpụrụ mbụ na nke abụọ. No.wa Nke 1 megide o. 2. Rafael Nadal agbaala egwuregwu 101 na Roland Garros kemgbe 2005 ọ tụfuru naanị abụọ. Otu n'ime ọnwụ ndị ahụ bịara, ị chere, site na Novak Djokovic, ma taa enwere ọtụtụ ihe karịrị iko Musketeer dị egwu. Anyị ga-egosi gị otu ị ga - esi banye Nadal na nke Djokovic bi na FREE na njedebe 2020 Roland Garros, ebe ọ bụla ị nọ.
Rafael Nadal vs Novak Djokovic dị ndụ
Courtlọikpe Philippe Chatrier ga-anabata ndị French Open ụmụ nwoke ikpeazụ Nadal na Djokovic taa, a na-ewepụkwa mgbachapụ oge elekere atọ nke abalị / 3pm BST. Ọ bụrụ na ị dabere na UK, ozi ọma ahụ bụ na ị nwere ike ịlele egwuregwu ahụ n'efu na ITV2 na weebụsaịtị ITV, ị nwere ike ịlele ya ma ọ bụrụ na ị nọ mba ọzọ na VPN. Anyị na-akọwa otú dị n'okpuru.
Nadal na Djokovic ezutela ugboro iri ise na ise ya na ndị Serbian nwere uru, ya na mmeri 55 na ọghọm 29. Ma na ụrọ, Spaniard nwere ihe ndekọ kachasị elu, na-enweta mmeri 26 na ọnwụ asaa.
Imeri taa ga-enye Nadal mmeri 100th ya na Roland Garros ma tinye ya n'ogo Roger Federer n'elu otu egwuregwu ndị nwoke na-ejikọ na ihe ndekọ aha 20 Grand Slam (13 French Open). Ọ bụrụ na Djokovic bụ onye mmeri, ọ ga-emechi 18 Slam ya (French Ga-emeghe abụọ) wee mechie oghere ahụ na Nadal.
Enwere ọtụtụ nsogbu na nsogbu ọ bụghị naanị taa, mana na egwuregwu zuru oke, mana oge ụfọdụ n'izu a ọ dị ka Djokovic enweghị ike ịme nke ikpeazụ ma ọlị. Ọ tara ahụhụ dị egwu na njedebe nke ikpeazụ megide Pablo Carreño Busta ma Stefanos Tsitsipas jụrụ ya mgbe ọ kwụsịrị ịtụgharị isi egwuregwu gaa na nke atọ. Mana ka ndị Greek tara ahụhụ, Djokovic chọtara akụrụngwa ọzọ na nke ikpeazụ wee mapee usoro ikpeazụ.
Njem Nadal gaa na nke ikpeazụ dị mfe karịa na ụfọdụ nwere ike ịrụ ụka n'ụzọ dị mfe karị, na-enweta mmeri na usoro kwụ ọtọ. Diego Schwartzman na Jannik Sinner abụrụla ndị kachasị ugbu a Eze Clay, mana Djokovic ga-etinye ule siri ike karị.
Serbian bụ 37-1 na 2020, nke ahụ bụ nkwenye ya na US Open n'ọnwa gara aga, n'agbanyeghị na ọ furu efu atọ n'ime njedebe anọ Roland Garros nke ọ na-egwu ruo taa. . Ka ọ dị ugbu a, ndekọ Nadal na 2020 bụ 21-4, nke pụtara na ọ gbuela tenis na-erughị nke ya na afọ a. Nke a nwere ike inye Djokovic ohere?
Ọ bụrụ na ị bụ onye ọbụla na-agba bọọlụ bọọlụ, ị gaghị achọ ida Nadal vs Djokovic live stream. Ya mere, gụọ iji chọpụta nhọrọ gị iji lelee ụmụ nwoke Roland Garros n'efu maka n'efu.
1 Onye nwere mmiri iyi Roland-Garros n'efu?
2 Etu esi agbasa Nadal na nke Djokovic site na mpụga obodo gị
3 Esi lelee Nadal na nke Djokovic n'efu na UK
4 Esi lelee Nadal na nke Djokovic na United States
5 Etu esi ebi ndu iyi Nadal na Djokovic na Australia
6 Etu ị ga-esi Live Stream French Open and Watch Tennis Online na Canada
7 Open French Open 2020: otu esi lelee tenis n'ịntanetị na New Zealand
Onye nwere mmiri iyi Roland-Garros n'efu?
Regionsfọdụ mpaghara na-enwe obi ụtọ ma a bịa na Roland Garros, ebe ọ bụ n'efu.
Na UK telivishọn ị nwere ike ịnweta mmiri ndụ na-emeghe n'efu nke French Open ekele ITV4 na karịa kpọmkwem ya ITV Hub gụgharia ọrụ, dị kpọmkwem site na ihe nchọgharị weebụ gị ma ọ bụ dịka ngwa maka igwegharị, mbadamba. , igbe dị n’elu, họta TV dị egwu, consoles na ndị ọzọ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ mkpuchi mpaghara gị, French TV ekpuchiwokwa gị, ọkachasị France TV Sport.
Na ndị ahụ Down Under tenis fans ndị na-arụsi ọrụ ike maka nke a, SBS n'efu nke Australia ga-enwekwa mkpuchi zuru ezu.
Etu esi agbasa Nadal na nke Djokovic site na mpụga obodo gị
Maka ị nweta nkwanye na ịkọwapụta nkọwa na mba tenis nwere mmasị na mba dịka US, UK, Australia, Canada na New Zealand, anyị nwere ozi niile ịchọrọ na ibe a.
Mana ọ bụrụ na ị gbalịa ile mkpuchi gị n'ime ụlọ site na ọnọdụ dị na mpụga obodo gị, n'oge na-adịghị anya ị ga-abanye na nsogbu: geoblocking. Nke a bụ ebe onye mgbasa ozi na-egbochi gị ikiri mgbasa ozi ha si mba ọzọ. Ọ bụ nsogbu nkịtị maka ndị na-egwu egwuregwu gburugburu ụwa. N'ụzọ dị mma, enwere ngwọta dị mfe n'ụdị VPN.
p class = »vanilla-image-block» style = »padding-elu: 100.00%;»>
Nweta ule ụbọchị 30 nke ExpressVPN 100% enweghị ihe ọghọm
Anyị enyochachaala VPN niile kachasị ewu ewu ma gosipụta ExpressVPN kacha mma n'ebe ahụ. Ọ dị mfe ịtọlite, nwere atụmatụ nche siri ike, ma dakọtara n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaọrụ ọ bụla gụgharia, gụnyere Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, na PlayStation. I nwekwara ike iji ya na gam akporo na ngwaọrụ mkpanaka iOS, yabụ iji nweta mgbasa ozi ahụ n'ụlọ ma nọrọ na nchekwa na ntanetị, nke a bụ nchịkọta anyị.
Nke kachasị, ExpressVPN na-abịa na nkwa ịkwụ ụgwọ ụbọchị 30 ka ị nwee ike ịnwale ya n'efu maka otu ọnwa, ma ọ bụ debanye aha maka atụmatụ kwa afọ wee nweta ọnwa 3 kpamkpam n'efu. Ọ bụ nhọrọ kachasị mma, yabụ lelee ya taa.
Esi lelee Nadal na nke Djokovic n'efu na UK
A na-agbasa akụkọ ikpeazụ nke ụmụ nwoke Roland Garros nke 2020 na UK na channelụ ITV4 na-akwụghị ụgwọ, yabụ onye ọ bụla nwere ike ịkwanye ya site na iji usoro ITV Hub nke ọwa ahụ. Nwere ike ịtụ anya ịhụ Nadal na Djokovic n'ọhịa malite na 2pm BST taa.
I nwekwara ike ilele ITV tennis na ntanetị na ntanetị na ITV Hub, nke dị na ọmarịcha ngagharị na ngwaọrụ mkpanaka niile (mana ọ bụghị na PS4, ọ dị nwute).
Ọ bụrụ na ị si na UK mana ọ bụghị n'ụlọ ugbu a, ịnwere ike ịnweta azịza kacha mma nke French site na ịzụta VPN.
Esi lelee Nadal na nke Djokovic na United States
Ikpeazụ ụmụ nwoke Roland Garros ga-amalite n'elekere itoolu nke ụtụtụ ET / 9 am PT na United States, ma ị nwere ike ịnabata NBC Sports.
Ọ bụrụ n’inwee egwuregwu NBC na USB, ị dịla njikere ịga ma lelee egwuregwu tennis Roland Garros site na webụsaịtị webụsaịtị; naanị banye na nkọwa ndị na-eweta TV gị.
Ndị na-egbutu USB nwere ike ile NBCSN na Sling TV, ebe ọ dị dị ka akụkụ nke onyinye Blue nke ọrụ kachasị elu. I nwedịrị ike ịnwale ikpe Slinge FREE nke ga-enye gị ohere ilele na-enweghị akwụ ụgwọ penny, ma ọ bụrụ na ị na-egwu kaadị gị.
Ọ bụrụ na ị nọ ugbu a na mpụga US, ị ka nwere ike iji VPN iji nweta mkpuchi ụlọ gị.
Etu esi ebi ndu iyi Nadal na Djokovic na Australia
Nadal na nke Djokovic ikuku na Australia. Gbanye na SBS malite n'etiti abalị, cherezie Rafa na Novak ka ha banye n'ọhịa. Ndị na-ekiri nwekwara ike iji ọrụ nkwanye n'efu SBS On Demand na-akụ na ya.
Ndị debanyere aha egwuregwu Kayo nwekwara ike ịkọwa ihe niile sitere na ndụ Roland-Garros nke ikpeazụ. Egwuregwu Kayo Egwuregwu na-efu € 25 kwa ọnwa ma nye ndị ọrụ ohere ịbawanye na ngwaọrụ abụọ n'otu oge, ebe atụmatụ Kayo Sports Premium na-enye iyi iyi atọ maka € 35 kwa ọnwa.
Ọ baghị uru ikwu, nke a na-eme ka ọ dị ọnụ ala ma ọ bụrụ na ịkekọrịta ya na ndị enyi, ezinụlọ, ma ọ bụ ndị ọzọ tenis fans; Na mgbakwunye, Kayo na-enye oge ikpe n'efu ka ị wee lelee ya n'efu.
Ọ bụrụ na ịnọghị na Australia n'oge ahụ, ị ​​ga-agbaso ụzọ VPN dị ka egosiri n'elu.
Etu ị ga-esi Live Stream French Open and Watch Tennis Online na Canada
Na Canada, ị nwere ike ilele njedebe nke ụmụ nwoke nke French Open na TSN na Bekee ma ọ bụ na RDS na French, mana ndị a bụ ọwa kachasị nke na-ejikarị ngwugwu TV akwụ ụgwọ.
Ọ bụrụ na ị nweta ha dịka akụkụ nke azụmahịa gị, ị ga-enwe ike ịbanye na nkọwa nke onye na-eweta gị ma nweta iyi nke Nadal na Djokovic.
Ọ bụrụ na ịnweghị eriri, ịnwere ike ịdenye aha na TSN ma ọ bụ RDS na-asọpụta naanị site na CA € 4,99 kwa ụbọchị ma ọ bụ (uru ka mma) € 19,99 kwa ọnwa.
Ma ọ bụrụ na ị kpebie ịdenye aha, ma ọ bụ meela otú ahụ, cheta na ị nwere ike iji ọrụ gụgharia egwuregwu kachasị amasị gị soro gị gaa ebe ọ bụla ị na-aga, nye VPN naanị nwalee Ihe dị ka 1% enweghị ihe ọghọm. ruo ụbọchị 100 ma soro ntuziaka ndị dị n'elu.
Open French Open 2020: otu esi lelee tenis n'ịntanetị na New Zealand
Radiolọ ọrụ redio gọọmentị maka Roland Garros na New Zealand bụ Sky Sport, nke na-efu $ 31,99 kwa ọnwa ma gụnye ọwa ndị a raara nye bọọlụ, rugby, cricket na golf.
Ndị nwoke Roland-Garros ga-amalite na 2am NZT na mbido ụtụtụ Mọnde.
Maka nkwanye mkpanaka, ịnwere ike ijikọ site na ngwa Sky Go, ma ọ bụrụ na ị nọ ugbu a na mpụga New Zealand, ịnwere ike iji VPN weghara mkpuchi TV nke ụlọ gị.
Tụlee ọrụ VPN kachasị mma n'ogo: